परदेशमा बैँस डढाउनेहरू
अपडेटः २२ जेठ २०७७ । ६:४५ स्रोत: worldometers.info/ covid19.mohp.gov.np
प्रताप ओली कर्नाटक (भारत), २७ भदौ
गति हेर्नु बयालाको, बेग हेर्नु पानीको
ठेकटुप्पो थाहा छैन, यही जिन्दगानीको
उँधो बग्ने गंगाजल, उँभो लिइ चढाउनु
यति राम्रो बालीबैँस, परदेशमै डढाउनु....
परदेशीका पीडा बोल्ने यो देउडा गीतका लेखक बझाङ खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका सुदर्शन थापा हुन् । देशमा गरिखाने वातारण नहुँदा भारतको बैंङ्लोर पुगेको उनी बताउँछन् ।
बझाङकै जयपृथ्वी नगरपालिकाका दिलबहादुर बोहरा बैंङ्लोरको जयनगरमा दिनभर साहुको गाडी धुने, झाडु लगाउने गर्छन् । उनलाई साहुले मासिक १० हजार रुपैयाँ तलब दिएको छ । उनीसहित उनकी श्रीमती र एक छोरालाई बस्न साहुले सानो चर्पीका लागि छुट्याएको ठाउँ जत्रो साँघुरो झुपडीमा बास पनि दिएको छ ।
त्यसैभित्र उनीहरू रात बिताउने गर्छन् । कहिलेकाहीँ पाहुना आउँदा बस्नलाई ठाउँ नहुने र साहुले कराउने गरेको बोहरा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘साहुको व्यवहारले गर्दा मैले ७ वर्षमा ७ पटकभन्दा बढी ड्युटी फेर्नुप¥यो । घर गएर के गर्नु ? पेट पाल्नैप¥यो । चाडबाड कहिले मनाइन्छ भन्ने नै बिर्सिन थालिसकें ।’
यी दुई प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । भारतमा रोजगारीकै लागि दैनिक हजारौं जना भारत छिर्ने गरेका छन् । किन मातृभूमि छोडेको भन्ने प्रश्नमा सबैको साझा उत्तर आउँछ– देशमा गरिखाने वातारण छैन ।
भारतमा हाल सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका मानिसहरू रोजगारीका लागि आउने गरेका छन् । यसका साथै उच्च शिक्षा लिन पनि नेपालका विद्यार्थीहरू भारत छिर्ने गरेका छन् । भारतमा बढ्दै गएको नेपालीको चापले उनीहरू झन्झन् समस्यामा पर्दै गएका छन् ।
भारतमा अहिले कति कामदार छन्, कति बेपत्ता भए, कतिले ज्यान गुमाए र कति बेचबिखनमा परे भन्ने अहिलेसम्म कुनै पनि निकायसँग तथ्यांक छैन । लाग्छ, यो विषय नेपाल सरकारको दायित्वभित्रै पर्दैन ।
कहिलेदेखि भारत छिर्न थाले नेपाली ?
भारत अंग्रेजको कब्जामा हुँदाताका नेपालीले बहादुरी देखाए । त्यस बेलादेखि नै भारतका केही बजार क्षेत्रमा नेपालीलाई बहादुर ठानेको भारतले बजार क्षेत्रमा सुरक्षा गार्डको काम दिएको र विस्तारै नेपालीले अन्य क्षेत्रमा पनि त्यतिखेरदेखि नै काम गर्न थालेका हुन् । त्यही बेलादेखि नेपालीहरू भारतमा रोजगारीका लागि आउन थालेको बझाङ थलारा गाउँपालिका वृद्ध नरू थापा बताउँछन् ।
उनका अनुसार २०५५ सालसम्म हरेक नेपालीलाई भारतीय नागरिकले बहादुर, गोर्खाली भनेर पुकार्थे । हरेक ठाउँमा नेपाली सम्मानका साथ जागिर पाउँथे । विस्तारै बढ्दै गएको नेपालीको उपस्थिति र नेपाली नागरिक स्वयम्को प्रवृत्तिले भारतीयले नेपालीलाई हेपाहा दृष्टिले हेर्न थालेका हुन् । अहिले बहादुर भनेर पुकार्ने १० प्रतिशत भारतीय पनि नरहेको थापा बताउँछन् ।
यसरी खस्कियो नेपालीको बहादुरी सम्मान
नेपालीको साख घट्नु र रोजगारीका लागि भारतीयले विश्वास नगर्नुको प्रमुख कारण हो चोरी । चोरी गरेकै कारण नेपालीहरू पटकपटक भारतीय प्रहरी र साहुको शिकार बन्ने गरेका छन् । आफ्नो नैतिकता र नेपाली बहादुरको इमानदारिता भुलेर एक नेपालीले चोरी गर्दा सोही टोलका अन्य नेपालीले पनि दुःख पाउने गरेका छन् ।
एक अर्कामा दलाल
पैसाको प्रलोभनमा परेर धेरै नेपाली नेपालीकै लागि दलाल बनिरहेका छन् । मादक पदार्थ बेच्ने, चेलीबेटी बेचबिखन, घरबार तहसनहस, बालबालिका बेचबिखनजस्ता काममा पनि नेपाली नै संलग्न रहेका छन् ।
अहिले भारतमा मात नकिनेर कुनै जागिर पाउन गाह्रो छ । जागिर लगाइदिएबापत लगिने पैसालाई मात भन्ने गरिन्छ । नयाँनयाँ नेपाली आउनासाथ उसबाट चर्को शुल्क असुल्ने धन्दामा नेपाली लाग्ने गरेका छन् ।
सामान्य ८/१० हजारको जागिर लगाइदिएबापत अहिले दलालहरूले न्यूनतम ५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिने गरेका छन् । यसरी नेपालीले नेपाली लुटपाट, दलाली गर्ने थाहा पाएपछि भारतीय साहुहरूले चलाखी अपनाउन थालेका छन् । यसको प्रत्यक्ष मार नेपालीलाई नै पर्ने गरेको छ ।
जाँड–रक्सी र जुवातास
साहुबाट पाएको तलब जुवातास र जाँड–रक्सीमै सिध्याउने नेपालीको कमी पनि छैन भारतमा । ड्युटी गर्ने ठाउँमै भेला भएर जुवा खेल्ने, कोठामा रक्सी खाँदै जुवा खेल्दै होहल्ला गर्ने प्रवृत्तिले पनि नेपाली साख घट्दै गएको छ । नेपालीहरूको मदिरा सेवन गरी मात्तिने, होहल्ला गर्ने प्रवृत्ति साहुलाई नपच्ने गरेका कारण जागिरबाट निकाला गर्ने र अनेक दुःख दिने गरेको पाइन्छ ।
चेलीबेटी बेचबिखनमा संलग्न
भारतमा नेपाली चेली बेच्ने कार्यमा प्रायः नेपाली नै संलग्न छन् । नेपाली चेलीहरू शिक्षित भएर अहिले धेरै चेतनशील भए पनि अझै अशिक्षित, गरिबीले ब्याप्त गाम्रीण क्षेत्रमा चेलीबेटी ललाई फकाई भारतीय बजारमा बेच्ने प्रचलन अझै पनि छ ।
युवतीहरूलाई बेचिन्छु भन्ने थाहा भए पनि उनीहरू गरिबी र लोभ लाग्दा आश्वासनका कारण दलालको सम्पर्कमा जोडिँदै भारतमा पुग्ने गरेका छन् । यस धन्दाका दलालीले समेत नेपालीको साख घटाएको छ ।
नेपालीको घरबार रित्तिन्छ नेपालीबाटै
एक महिनाको दुधे बालक छोडी फलानोकी श्रीमती फरार भन्ने कुरा सुन्दा कोही अचम्म मान्दैनन् अचेल भारतमा । नेपाली नै नेपालीको घरबार बिगार्न सक्रिय रहेको विभिन्न घटनाले पुष्टि गरिसकेको छ ।
भारतमा रोजगारको सिलसिलामा आएका पुरुषहरूले कसैकी राम्री श्रीमती देख्नासाथ त्यसको पिछा गर्ने गरेको एक युवा सुरेन्द्र रावल बताउँछन् । उनका अनुसार गत मंसिर पुस महिनामै मात्रै धेरै जनाले आफ्नी श्रीमती अर्काको भएको देख्नुपर्यो ।
आफन्तबाटै यस्ता घटना हुने गरेको रावल बताउँछन् । मीठामीठा आश्वासन दिलाएर आफन्त नै घरबार बिगार्न सक्रिय रहेको उनको तर्क छ । त्यस्तै, सुर्खेतका वसन्त कुमार भन्छन्, ‘दुःख परेको बेला एकअर्कालाई साथ दिऊँला पाऊँला भनेर अग्निलाई साक्षी राखी विवाह गर्ने अहिलेका श्रीमतीहरू त पैसाका लागि मात्र विवाह गर्ने रहेछन् ।
आजकाल यो बैंङ्लोरमा केही पैसाका लागि मात्रै धेरै नेपाली महिला साना दूधे बालक छोडेर अर्काकी भइरहेका छन् । के ९ महिना गर्भमा बोकेर जन्म दिएपछि हुर्काउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन होला र तिनीहरूलाई ?’
विभिन्न संगठनबाट लुटपाट
भारतमा प्रवासी नेपालीहरूको हितका लागि भन्दै दर्जनभन्दा बढी संघ, संगठन तथा समिति स्थापना भएका छन् । यिनै संघ, संगठन तथा समितिले प्रवासमा मात्रै होइन, नेपालमै आवश्यकता पर्याे भने सहयोग गरिरहेका छन् ।
तर, समितिहरू पछिल्लो समय पारदर्शी नभएको गुनासाहरू प्रवासी नेपालीहरूबाटै आउन थालेका छन् । संघ, संगठन तथा समितिका केही मान्छेहरूले सहयोगका लागि चन्दा सहयोग माग्ने गरेको तर सबै हिसाब किताब नदेखाई मिलेर पैसा खाने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
नसुध्रिएको भाइचारा सम्बन्ध
भारतमा बसेर रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरूमा थप विकृति आउन नदिन नेपालीले आफ्नो बानी सुधार्नुपर्ने आवश्यकता खट्किएको भारतमै बसेर समाज सेवा तथा राजनीति गर्दै आएका राजेश रावल बताउँछन् । नेपाली नेपालीबीच सद्भाव बढ्यो, नैतिकता, इमानदारिता बढ्यो भने भारतमा नेपालको इञ्जत बढ्ने रावलको भनाइ छ ।
अहिले भारतीय साहुको ज्यादती बढ्नुको कारण भनेको खराब आचरण भएका नेपालीका कारण भएको उनी बताउँछन् । रावल भन्छन्, ‘यहाँ एउटा गलत आचरण भएको नेपालीको कारणले सबैले सजाय पाउनुपरेको छ । पैसाका लागि आफ्नो पहिचान, इमानदारिता बेच्नु कायरता हो । परिश्रम गरेको फलले जीवनभर आनन्द मिल्छ । चोरी, डकैती, लुटपाट तथा ठगी गरेको पैसाले जति भए पनि पुग्दैन ।’
स्वदेशमा नै किन पीडा खेप्न तयार छैनन् ?
नेपाल विकासोन्मुख देश भएकाले रोजगारको मेरुदण्ड मानिने उद्योगधन्दा नफस्टाएकाले काम गर्ने अवसर नभएको भारतमा रोजगारी गर्दै आएका कञ्चनपुर दैजीका युवा देवराज भट्ट बताउँछन् । उनले भने, ‘साहुको किचकिच सुनेर विदेशी भूमिमा बस्ने रहर होइन । तर, देशमा केही गरौं भन्नेका लागि पनि सबै उपलब्धता छैन ।
ग्रामीण भेगमा कृषि खेती शुरू गरौं भने बजारसम्म पुर्याउन धेरै खर्च हुन्छ, त्योअनुसार कमाइ हुँदैन । सबै सिजनमा हामी निरन्तर उत्पादन दिन पनि असफल हुन्छौं । व्यापारीहरू पनि विदेशबाट आयात गर्नै सजिलो ठान्छन् । त्यसैले गाह्रो छ । त्यस्तो गर्नुभन्दा बरु पीडा सहेर बस्नु वेश ।’
यता कञ्चनपुर कृष्णपुरका युवा गणेश जोशी भने नेपाल सरकारले युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम भन्दै जनता झुक्याउने कार्यक्रम ल्याएको तर्क गर्छन् । सरकारले ल्याएका स्वरोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने, सबै बेरोजगार युवाले अवसर नपाउने गरेको जोशी बताउँछन् ।
उनले भने, ‘सरकारले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका बारेमा खूब प्रचार गर्याे । स्नातक पास मैले पनि गरेको थिएँ । के के न होला भन्ने सोचेर घरमै बसें । यताउता धाउँदा ऋण निकाल्नै लामो प्रक्रिया रहेछ । झन्झट लागेर इन्डिया आएँ ।’
राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवी राजेश रावल पनि नेपालमा तत्काल सम्भावना नरहेको बताउँछन् । राजनीतिले ग्रस्त नेपालमा पहुँचवालाले सबै अवसर खोस्ने गरेकाले सर्वसाधारणलाई गरिखाने वातावरण नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘देशमा केही उदाहरणीय युवा पनि छन् जसले आफू र अरुलाई रोजगारी प्रदान गरेका छन् । तर उनीहरूका पीडा सरकारले अझै नबुझेको देखिन्छ ।
नेपाली किसानलाई पनि भारतमा भारतीय सरकारले दिएजस्तो सेवा सुविधा दिने हो भने नेपाली किसान थप उत्साहित हुने थिए र तरकारी र फलफूलमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने थियो ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २८, २०७६, ०२:०७:००
लकडाउन खुकुलो नबनाए पोखराका व्यवसायीले लकडाउन अवज्ञा गर्ने
मोरङमा थपिए २ जना कोरोना संक्रमित
घरको छतमा झगडा हुँदा २ जना घाइते
४ दशकसम्म चर्चामै पश्चिम सेती परियोजना, आशा र निराशा उत्तिकै
घरमा कोरोना आतंक, बारीमा फौजी आतंक
किशोरी बलात्कार गरी फरार शिक्षक पक्राउ, थप १ जनाको खोजी जारी
बझाङको बित्थडचिरका थप ७ जनामा आरडीटी पोजेटिभ
बझाङमा खाद्यान्न बोकेको जीप दुर्घटना
चिनियाँ विमान प्रयोग गरी सगरमाथाको सर्भे
काम गर्न नपाएपछि आत्महत्या प्रयास
कोरोना उपचारमा १० अर्ब खर्च, अनुमानभन्दा ३ अर्ब बढी सकियो
अनुमतिबिना सेवा सञ्चालन गर्दा कारवाहीमा एनसेल
सलह नेपाल आउने सम्भावना न्यून
भारतबाट लुकिछिपी नेपाल आउने घटे
४ घण्टाकाे छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विज्ञले के दिए सुझाव ?
लकडाउन उल्लंघन गर्दै २१ जेठदेखि बजार खोल्ने हेटौँडाका व्यवसायीको निर्णय
तलब नबढेपछि ईसीडीका शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारी आन्दोलित
भारतले भन्यो, ‘पारस्परिक सम्मानका आधारमा अघि बढ्छौँ’
चीनलाई जस्तै नेपाललाई घेर्ने भारतको तयारी !
२१ जेठदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु गर्न माग